पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रमा सहभागी भएर आक्रमण नगर्न आग्रह गरिएको छ।
करिब दुई हप्ता पहिले अलग्गिएर छट्टै पार्टी घोषणा गरेका मोहन वैद्य समूहले हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)का स्थानीय नेता कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमलाको शुरुआत गरेको छ। आज दिउँसो उक्त समूहले चितवन जिल्ला, चौबीसकोठीको पश्चिमपट्टि पर्ने त्रिचोकमा गरेको सांघातिक हमला र गोली प्रहारका क्रममा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा एकीकृत माओवादी चितवन जिल्लाका सचिवालय सदस्य नारायण आचार्य, जिल्ला पार्टी सदस्य उत्तम गुरुङ र पार्टी सदस्य सूर्य तामाङ घाइते हुनुभएको छ।
आफुले राम्रो गर्नु पर्यो नि । आलु रोपेर गोल्भेंडा फलाउने सपना देख्ने त तपाईंहरु नै हो नि होइन र ? अरु पार्टीको कार्यकर्तालाई कुटाउन तपाईंहरुले दिएको प्रशिक्षण आज आफ्नै पार्टीमा फर्क्यो । अब के गर्नुहुन्छ, यस्तै प्रेस बिज्ञप्ती निकाल्ने अनी रुने ।